Warar dheerad ah Ayaa Ka Soobaxaayo Qarax Saakay Kadhacay Wadada Warshadaha. – STAR FM SOMALIA
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qarax Saakay ka dhacay Magaalada Muqdisho Gaar ahaan meel u dhow Wasaaradda Difaaca dowladda Soomaaliya.
Qaraxa oo ahaa Miinada dhulka lagu Aaso , ayaa waxaa lala eegtay Gaadiid ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo maraayay Wadada Warshaddaha qeybta Xigta Wasaaradda Gaanshaadhiga.
Ugu Yaraan hal qof ayaa ku dhintay Saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen Qaraxaasi sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Wasaaradda Difaaca.
Goobta uu ka dhacay ayaa ah goobtii horay loogu qarxiyay Jeneraal Goobaale oo ka tirsanaa Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.
Ciidamada dowladda oo gaaray goobta ay wax ka dhaceen ayaa billaabay baaritaano lagu xaqiijinaayo Guud ahaan goobta.